Hadino ny fanarenana: mety ho voan'ny areti-mifindra 10 heny ny Coronavirus | Vaovao Mafana momba ny dia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hadino ny fanarenana: mety ho voan'ny virus 10 heny ny Coronavirus
Hadino ny fanarenana: mety ho voan'ny virus 10 heny ny Coronavirus
Fantatra izany ary notaterin'ny famoahana TravelNewsGroup efa tamin'ny volana Mey ary nangina. Ankehitriny, manam-pahaizana Maleziana no maneno ny lakolosy fanairana manao hoe:
Ny mety ho voan'ny COVID-19 dia mety ho lasa avo 10 heny, araka ny fanadihadiana navoaka androany tao Malezia. Tsikaritr'i Malezia ny fitrangan'ny coronavirus vaovao izay areti-mifindra folo heny, hoy ny dokotera Noor Hisham bin Abdullah, mpandidy endocrine Maleziana iray izay talen'ny talen'ny jeneraly misahana ny fahasalamana hatramin'ny volana martsa 2013. amin'ny fitarihana an'i Malezia hiady amin'ny valanaretina COVID-19.
TravelWireNews efa nitatitra momba ny fihenan'ny COVID-19 tamin'ny volana Mey mifototra amin'ny tatitra nataon'ny RT Rosiana. Ity tatitra ity dia noravan'ireo media tandrefana.
The TravelWireNews (famoahana rahavavin'i eTurboNews) nitatitra tamin'ny Mey 2020: Mey voalohany fikarohana, izay notontosain'ny ekipa amerikana sy britanika niaraka notarihan'ny Laboratoara nasionaly Los Alamos. Navoaka talohan'ny fandinihan'ny mpiara-miasa azy io ho 'fampitandremana mialoha' ho an'ny mpikaroka hafa. Raha ny zava-misy, ny mpahay siansa mandinika ny coronavirus manerana an'izao tontolo izao dia mety efa nanadihady ny filaharan'ny fototarazon'ny tsiranoka taloha, ary noho izany dia zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ity ekipa ity hahazoana ny vaovao farany. "Tsy afaka ny ho jamba isika rehefa mamindra ny vaksinina sy ny antiômazika ho fanandramana klinika," hoy ny mpanoratra mitarika Dr Bette Korber, fantatra amin'ny asany momba ny VIH.
Satria mbola tsy nodinihina ny taratasin'io taratasy io dia navoaka an-tserasera tao amin'ny mpizara BioRxiv. Na izany aza, ny lazan'ny mpahay siansa voarohirohy dia manondro fa ny zavatra hita dia tsara ary tsy maintsy raisina amin'ny fahamatorana lehibe - 33 pejy ny tatitra, ary fohy ny fihomehezana. "Vaovao sarotra ity, '' hoy i Korber momba ny valiny.
Ilay fiovana, hita tany aloha tany amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ary nantsoina hoe D614G, dia hita tamina telo tamin'ny 45 tranga farafahakeliny tao amin'ny sampahom-boaloboka iray izay natomboka tamin'ny tompona trano fisakafoanana niverina avy any India ary nanitsakitsaka ny quarantine fonenany 14 andro. Voasazy dimy volana an-tranomaizina ilay rangahy ary nandoa onitra. Hita tao amin'ny cluster iray hafa misy ny olona miverina avy any Filipina ny fihenjanana.
Dr. Anthony Fauci, mpitsabo aretin-tsaina ambony any Etazonia, izao dia nilaza fa ny mutation vaovao dia mety hanafaingana ny fihanaky ny coronavirus. Ny tebiteby dia mety hidika fa ny fanadihadiana efa misy momba ny vaksinina dia mety tsy feno na tsy mahomby amin'ny fiovan'ny mutation, hoy ny Tale Jeneralin'ny Fahasalamana Noor Hisham Abdullah.
"Ny fiovan'ny D614G dia mahatonga ny viriosy ho voan'ny virus. Mety hiparitaka haingana kokoa izy io ary handrakotra ny rafitra fitsaboana raha tsy ampitombointsika ho avo roa heny ny ezaka fanaraha-maso ataontsika, ”hoy ny Dr. Edsel Salvana
Dr. Salvana dia talen'ny Ivontoerana biolojika molekiola sy bioteknolojia ao amin'ny Ivon-toerana Nasionalin'ny fahasalamana ao amin'ny Oniversiten'i Philippines Manila, ary Profesora mpiara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka klinika sy mpandrindra ny fikarohana ao amin'ny sehatry ny aretina azo avy amin'ny departemantan'ny fitsaboana ao Filipina Hopitaly ankapobeny. Izy koa dia profesora mpanampy amin'ny fahasalamana manerantany ao amin'ny University of Pittsburgh. Izy no filohan'ny komity ao amin'ny komitin'ny VIH an'ny Fikambanana Filipina momba ny microbiology sy ny areti-mifindra ary nitarika ny famolavolana ny torolàlana momba ny klinika eo an-toerana momba ny fitsaboana ny areti-mifindra amin'ny VIH. Izy koa dia mipetraka ho toy ny solontenam-panjakana ao amin'ny Global Fund Country Coordinating Mechanism.
Ny fiovan'ny nofo dia nanjary ny variant be indrindra tany Eropa sy Etazonia, miaraka amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana milaza fa tsy misy porofo manamarina fa ny aretina dia mitarika aretina lehibe kokoa. Ny gazety iray navoaka tao amin'ny Cell Press dia nilaza fa ny fiovan'ny mutation dia mety tsy hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny vaksininy novolavolaina ankehitriny.
Tizy D614G mutation ao amin'ny SARS-CoV-2 dia malaza ratsy noho izany mitombo ny fanapahana maneran-tany. Io fiovana io dia manova ny asidra amine amin'ny toerana 614, manomboka amin'ny D (asidra aspartika) ka hatramin'ny G (glycine) - noho izany, D-614-G. Ny D614 voalohany dia ny variant G614 ankehitriny. Ny fanontaniana dia: Inona ny fiantraikan'ny fiainana tena izy ateraky ny fiovan'ny toetr'andro na ny G614, amin'ny resaka fifindran'ny aretina, ny hamafin'ny aretina, ny fitsaboana ary ny vaksiny?
Tamin'ny fanadihadiana tamin'ny Jolay natao pirinty tamin'ny Cell, Dr. Bette Korber, biolojika fanaovana kajy, ary mpiorina genetika, ary mpiara-miasa ao amin'ny Laboratoara Nasionaly Los Alamos dia nanadihady ny filaharana SARS-CoV-2 tamin'ny marary 999 tany UK. Ny valiny dia naneho fa ireo marary voan'ny variant G614 dia nanana viraliny avo kokoa raha oharina amin'ny D614. Ao amin'ny kolontsain'ny sela ao anaty lovia laboratoara, Korber et al. nampiseho fa ny variant G614 dia nampiseho areti-mifindra nitombo noho ny D614.